Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Dochie ụgbọ elu Fighter Canada na ndị ọhụrụ
Taa, Gọọmenti Canada mara ọkwa na na-eso nlebanya nke atụmatụ ndị e debere, 2 bidders nọgidere na-eru eru n'okpuru Future Fighter Capability Project mpi usoro ịzụ ahịa:
• Gọọmenti Sweden-SAAB AB (publ) - Aeronautics na Diehl Defense GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd., na RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., na
• Gọọmenti United States—Lockheed Martin Corporation (Ụlọ ọrụ Lockheed Martin Aeronautics) ya na Pratt na Whitney.
A tụlere atụmatụ ndị siri ike n'ihe gbasara ike, ọnụ ahịa na uru akụ na ụba. Ntụle ahụ tinyekwara ntule mmetụta akụ na ụba.
N'ime izu ndị na-abịa, Canada ga-emecha usoro ọzọ maka usoro ahụ, nke, dabere na nyocha ọzọ nke ntinye akwụkwọ 2 fọdụrụnụ, nwere ike ịgụnye ịga n'ihu na mkparịta ụka ikpeazụ na onye na-enye ọkwa kachasị elu ma ọ bụ ịbanye na mkparịta ụka asọmpi, bụ nke ndị na-agba ọsọ 2 fọdụrụnụ. a ga-enye ohere iji meziwanye atụmatụ ha.
Gọọmentị Canada na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ntinye nkwekọrịta na 2022, na-ebuga ụgbọ elu dị ka 2025.
• Nzụta a bụ ntinye ego kachasị mkpa na RCAF n'ime ihe karịrị afọ 30 ma dị mkpa maka ichekwa nchekwa na nchekwa nke ndị Canada na izute ọrụ mba ụwa.
• Gọọmenti Canada malitere usoro asọmpi mepere emepe na nke doro anya iji nweta ụgbọ elu agha ọhụrụ na 2017.
• Ndị ọrụ gọọmentị mere nnukwu njikọ aka na ndị na-ebubata ya, gụnyere ụlọ ọrụ ụgbọ elu Canada na ụlọ ọrụ nchekwa, iji hụ na ha nwere ọnọdụ nke ọma isonye na ịzụ ahịa.
• E weputara ndị na-ebubata ihe ruru eru arịrịọ maka atụmatụ na Julaị 2019. Ọ mechiri na Julaị 2020.
• Amụma uru ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ nke Canada, gụnyere atụmatụ bara uru, metụtara ịzụ ahịa a. A na-atụ anya na nke a ga-ebute ọrụ bara uru na uto akụ na ụba maka ụgbọ elu Canada na azụmaahịa nchekwa ruo ọtụtụ iri afọ na-abịa.
• Onye nleba anya ziri ezi nke nọọrọ onwe ya na-ahụ maka usoro a niile iji hụ na ọ na-egwu egwuregwu maka ndị niile na-ere ahịa.
• Onye nleba anya nke ndị ọzọ nọọrọ onwe ya na-arụkwa ọrụ iji nyochaa ịdịmma na ịdị irè nke ụzọ ịzụrụ ihe.